Manangana votoaty fiarovana an-tsivalo amin’ny fiteny Aymara ny “Apthapi Digital” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2020 11:16 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Español, English
Fandravahan'ny tetikasa avy amin'i Phuyu
Vao avy nametraka fitaovana (votoaty) ahafahan'ny Aymara mpikirakira aterineto miaro ny tenany anjotra ny tetikasa “Apthapi Digital” ankehitriny. Natao hahatratra ireo mpamaky sy mpihaino amin'ny fiteny Aymara amin'ny fomba samihafa mahasahana lohahevitra fototra tahaka ny fiarovana amin'ny telefaonina finday, tenimiafina matanjaka kokoa, fahamailoana manoloana ny rindrantsompatra sy fitaka fanjonoana, fomba fitety aterineto azo antoka kokoa ary ny maha-zavadehibe ny fiarovana lahatahirin-tena manokana ireo fitaovana lahatsoratra, fihaino, fijery ary sary fandravahana ireo.
Ny voambolana “Apthapi” dia manondro fomba nentim-paharazana amin'ny kolontsaina Andeanina izay ifampizaran'ny fianakaviana iray ny vokatra ara-tsakafony amin'ny hafa amin'ny alalan'ny famoriana sy fametrahana azy ireo amin'izay ho atolony amin'ny aguayo (na lamba) nentim-paharazana. Ao anatin'izany fomba fisaina mifampizara izany no itadiavin'ity tetikasa ity mizara ny fahalalàny momba ny fiarovana an-tsivalo (dizitaly) amin'ny hafa amin'ireo endrika isankarazany mba ho mora idiran'ny mpanaraka vaovao izay mety tsy ho afa-miditra amin'ireo karazam-botoaty ireo.
Noho ny tohana avy amin'ny Internews, ny tetikasa dia najoron'ny Global Voices Aymara, tetikasa Lingua manolotra vaovao avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ho amin'ny fiteny Aymara, ary fiteny ifampiresahan'ny olona manodidina ny roa tapitrisa ao amin'ny faritra Andeanina, ao anatin'izany ny firenena Bolivia, Però, ary Shily. Ny Rising Voices no manome ny fanohanana ara-pampitaovana ho an'ny tetikasa. Niasa niaraka ny mpitantana ny tranonkala Victoria Tinta sy ny mpandika teny Elias Quispe Chura handika sy hamangitra lahatsoratra dimy. Ao anatin'ny fizotra, misy ny toerana fanangonana fiteny izay tsy nisy tamin'ny fiteny Aymara teo aloha, toy ny “chimpuña” manondro ny manafin-tsoratra sy “Llika jark'aqäwi” milaza ny fiarovana an-tsivalo. Mifototra amin'ireo asa famangitana sy fandikan-teny teo aloha, miaraka amin'ny fampidirana voambolana vaovao, zaraina ao amin'ny pejin'ny tetikasa ihany koa ireo lisitra voambolana ireo.
Indreto ny lahatsoratra dimy efa voadika ho amin'ilay fiteny efa vonona ao amin'ny habaka GV Aymara:
Iarahan'ny tetikasa “Apthapi Digital” miasa amin'izany ny fikambanana ara-paritra roa: Código Sur, izay namokatra fitaovana (votoaty) fiarovana an-tsivalo amin'ny fiteny espaniola amin'ny alalan'ny tetikasa iray antsoina hoe Milpa Digital. Ankoatra izany, nampanara-bolontany ireo loharano voatonona etsy ambony ny fikambanana Huaira miorina ao Ekoadaoro, ary nandika azy ireny ho amin'ny fiteny Kichwa amin'ny alalan'ny tetikasan-dry zareo antsoina hoe Shigra Digital. Efa natao ho vonona ao anaty lisansa Creative Commons ireo votoaty nampanaraham-bolontany ao amin'ity tetikasa vaovao ity.
Fanampin'izany, navadika ho amin'ny endrika feo fanao amin'ny radio antsoina hoe “cuñas” ireo lahatsoratra ireo mahatonga azy ho azon'ny mpiteny Aymara izay tsy mamaky na manoratra ilay fiteny, saingy afa-miditra amin'ny alalan'ny fitaovana toy ny tobim-pampielezam-peo an'ny fiarahamonina na dosie feo amin'ny alalan'ny fampiasa fampitan-kafatra. Noho ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana iray mpanatontosa fandaharana amin'ny radio miorina ao Cochabamba antsoina hoe CEPRA, izay nampanara-bolontany ny lahatsoratra, narafiny ny script [fizotran-dresaka ifanaovana], ary narakitra ny resaka, efa vonona amin'ny endrika azo henoina ireo votoaty (fitaovana) ireo amin'izao fotoana izao. Ny andiany dia manjohy ny fifampiresahana eo amin'i Tata Paulino sy ny zananivavy Julia, izay manampy ny rainy amin'ny fomba hanatsarany ny fiarovana an-tsivalo [dizitaly] ao amin'ny findainy sy ny solosainy.
Arahana fandravahana manokana avy amin'ilay artista iray avy ao Bolivia antsoina hoe Phuyu ireo lahatsoratra sy dosie fihaino ireo. Natambatra ihany koa ireo fandravahana sy fihaino ireo hananganana andiana lahatsary.
Farany, natao ihany koa izay hanatrarana olona maro dia maro araka izay azo atao ny ampahany maro amin'ny votoaty amin'ity tetikasa ity. Navelatra ny fiaraha-miombon'antoka mba ahafahana mandefa ireo votoaty ireo, indrindra ireo programa fihaino, amin'ny tobim-pampielezam-peo manana fandaharana amin'ny fiteny Aymara. Ohatra, iarahan'ny Global Voices Aymara miombona antoka ny Radio Ayni ao Arica, Shily hizarana ireo votoaty ireo ao amin'ny programany. Ho an'ny fifampizarana amin'ny media sosialy indray, miray ekipa amin'ny mpiara-dia aminy hatry ny ela ao amin'ny Jaqi Aru ry zareo hampiely ny votoaty amin'ny alalan'ny tambajotran-dry zareo.
Mbola am-pitadiavana mpiara-miombona antoka hafa maro bebe kokoa ry zareo ahafahana mizara ity torohay manana ny lanjany ity sy ahafahana mihazona ireo mpikirakira aterineto ho amin'ny toerana azo antoka kokoa anjotra. Raha hitady torohay bebe kokoa, miangavy hifandray amin'ny ekipan'ny GV Aymara.